कोरोना नियन्त्रणको लागि अहिलेसम्म १० अर्ब रुपैयाँ खर्च,, पूरा पढ्नुहोस! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
कोरोना नियन्त्रणको लागि अहिलेसम्म १० अर्ब रुपैयाँ खर्च,, पूरा पढ्नुहोस!
काठमाण्डौ – कोरोना महामा’री निय’न्त्रण तथा रोकथामकाे लागि सरकारले अहि’लेसम्म झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कोरोना नि’यन्त्रण, उपचार, क्वरेण्टीन निर्माण र राहत वितरणमा सरकारले नाै अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीका अ’नुसार को’रोना महा’मा’री नियन्त्रण कोष, सरकारबाट विनियोजित रकम र प्रदेश तथा पालिकाले गरी नाै अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
तहगत रुपमा लकडाउन खुकुलो पार्दै लैजाने गरी मस्यौदा तयारी गरी सरकारलाई बुझाउने समझदारी पनि बैठकमा बनेको छ । यो खबर उज्यालो अनलाईन मा प्रकाशित छ ।
Previous रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल भन्नुहुन्छ : हाम्रो नेपाली सेना आवश्यक परे यु’द्ध गर्न तयारी अब’स्थामा छन…हेर्नुहोस् ।
Next पहिले नक्सासम्बन्धी वि,धेयक संसदबाट पा,रित गरिन्छ, त्यसपछि अरू भन्नू हुन्छ: गगन थापा…हेर्नुहोस l